လက်ကား XJC-DN-1050A torque အာရုံခံထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | XJCSENSOR
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမှုနှင့် signal ကို output ကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြီးမှတဆင့် 1. မြင့်မားသောတိကျစွာခုခံ strain gauge နိယာမ။
2. အနိမ့်နှင့်အလတ်အကွာအဝေး torque တိုင်းတာခြင်းနှစ် ဦး စလုံးအပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာ torque တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
၃။ နှစ်ဖက်စလုံးသည် axial bonding ဖြစ်၍ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။
၄။ အနိမ့်ဆုံးအရှိန်နှုန်းသည် ၈၀၀၀ ကြိမ် / မိနစ်ထက်နည်းသည်။
၁။ လျှပ်စစ်တိုင်းတာခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းနိုင်သောအင်ဂျင်လည်ပတ်မှုစွမ်းအားသုံးကိရိယာနှင့် output torque နှင့် power တို့ကိုတိုင်းတာပါ။
၂။ မော်တာ၊ လေ၊ စုပ်စက်၊ ရောနှောခြင်း၊ လျှော့ချစက်၊ ဂီယာအုံ၊ အမြှောက်၊ ပန်ကာ၊
၃။ အမျိုးမျိုးသောစက်စင်တာများနှင့်အလိုအလျောက်စက်ကိရိယာများ၏ torque ကိုစစ်ဆေးခြင်း။
4. အမျိုးမျိုးသောအလှည့်ပါဝါပစ္စည်းကိရိယာ၏ torque နှင့်ထိရောက်မှုကိုစမ်းသပ်နေကြသည်။
viscometer, လျှပ်စစ်, pneumatic, ဟိုက်ဒရောလစ် torque ထုတ်လုပ်ရန် torque ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု။
၆။ ခိုင်ခံ့သော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊
၇။ sensor အပိုင်းကိုအလယ်အလတ်တူရိယာမှခွဲထုတ်။ တိုင်းတာနိုင်သော panel၊ PLC သို့မဟုတ် DCS နှင့်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
The Restrain strain သည်ပေါင်းစည်းထားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအထိခိုက်မခံသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးပေါင်းစပ်ထားသော circuit တစ်ခု၊ power supply နှင့် signal output ကို brush မှသဘောပေါက်သည်။ အလတ်စားနှင့်အနိမ့်အကွာအဝေး torque တိုင်းတာခြင်း။ လမ်းညွှန်နှစ်ခုလုံးရှိ torque တန်ဖိုးများကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော shaft keys ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
XJCSENSOR စက်ရုပ်ပူးတွဲ torque အာရုံခံကိရိယာသည်ကြီးမားသော torsional တောင့်တင်းခြင်း၊ လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှုမြန်နှုန်း၊ တိကျမှန်ကန်မှု၊ ကောင်းမွန်သောမြင့်မားခြင်းနှင့်အပူချိန်နိမ့်ခြင်းလက္ခဏာများ၊ မြင့်မားသောအချက်ပြမှုနှင့်ဆူညံသံအချိုးအစားနှင့်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်းတို့၏ခုခံနိုင်စွမ်းအား strain အမျိုးအစားကိုအခြေခံသည်။
2. ထောက်ပံ့ရေးအာဏာ၏အကွာအဝေး: 15 ± 0.5V
၃။ Output signal ဝါယာကြိုးသည်မြေပြင်သို့မရောက်ရှိနိုင်ပါ။ short circuitoutput current အားဖြင့် supply သည် 10mA ထက်မကြီးစေပါ။
4. ကာကှယျကာကှယျကာကှယျအလွှာ± 15V အများပြည်သူထောက်ပံ့ရေး (ပါဝါမြေပြင်) ၏ဘုံဆိပ်ကမ်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။
ပြanyနာများရှိပါက ၅။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
ရှေ့သို့ XJC- ZL13 တင်းမာမှုအာရုံခံကိရိယာ
နောက်တစ်ခု: XJC-DN-2001 Torque Sensor
XJC-S07-q-20 Load ဆဲလ်